Didier Drogba oo si weyn u diifacay macalinkiisii hore Jose Mourinho – Gool FM
(England) 23 Nof 2018. Halyayga kubada cagta Didier Drogba ayaa aaminsan in tababaraha kooxda Manchester United ee Jose Mourinho uu ku guuleysan lahaa horyaalka Premier League hadii uu leylin lahaa Manchester City.
Shalay ayay ahayd kadib markii uu Didier Drogba si rasmi ah ugu dhawaajiyay inuu ka fariistay ciyaaraha kubbada cagta, kadib mudo dhan 20 sano uu ku soo dhex jiray.
Drogba ayaa wareysi uu ku bixiyay wargeyska “The Sun” ee dalka England wuxuu ku diifaacay macalinkiisii hore ee Jose Mourinho wuxuuna ugu horeyn hadalkiisa ku bilaabay.
“Waxaan qabaa hadii Mourinho uu qeyb ka ahaan lahaa Manchester City inuu ku guuleysan lahaa horyaalka Premier League labo ama seddex jeer”.
“Inaad macalin ka noqoto Manchester United kadib Sir Alex Ferguson ma ahan wax fudud, dadka waxay kaliya fiirinayaan sida ugu fiican, Mourinho waa mid ka mid ah shaqsiyaadka ugu fiican, sidaas darteed wuxuu helayaa dareenkan oo dhan”.
“Waxaan u maleenayaa inay tahay mas’uuliyad adag shaqada kooxda Manchester United, waxa uu isku deyayaa inuu bedelo qaabkiisa, waana waxa ay sameeyaan macalimiinta ugu fiican, marka ay xaalada ku soco si aan fiicneyn”.
Si kastaba Didier Drogba ayaa kala soo shaqeeyay macalinka reer Portugal ee Jose Mourinho kooxda reer London ee Chelsea, wuxuuna kula soo guuleestay horyaalka Premier League.
Álvaro Arbeloa oo ka hadlay saameynta ay ku yeelatay Benzema bixitaanka Cristiano Ronaldo